မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် - အမြဲမေးနေကျ: ပို့စ်တွေဖတ်တဲ့ ၊ ရေးတဲ့အခါ သိရမှာတွေ
ပို့စ်တွေဖတ်တဲ့ ၊ ရေးတဲ့အခါ သိရမှာတွေ
ပို့စ်တွေကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ဖို့ အထူးစာသားတွေ၊ နည်းလမ်းတွေရှိသလား။ ?
များသောအားဖြင့် သင်၏ဆွေးနွေးချက်ပို့စ်များတွင် စာသားသက်သက်များသာ ပါဝင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သင်သည် စာသားများကို မည်း၍ထူစေခြင်း၊ စောင်းစေခြင်း စသည်တို့ဖြင့် အထူးပြုလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
သင်သည် ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူများမှ ဖန်တီးပေးထားသော ဖိုပြုံးချိုလေးများ ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင်၏စိတ်ခံစားချက်အားဖော်ပြရန် သုံးနိုင်သည်။ ထို့ပြင် သင်၏ ရေးသားမှုများတွင် ပုံရိပ်များထည့်သွင်းလိုပါက [img] စာသားကိုသုံးနိုင်သည်။
vB Code နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာ တွင်ကြည့်ပါ။
သင်သည် အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခုရေးသားရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ရှိပြီးသား အကြောင်းအရာအားစာပြန်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ဦးမှ ထို Thread အားအကြောင်းပြန်သည်နှင့် သင့်အား အီးမေးလ်ဖြင့်အသိပေးရန် ရွေးချယ်ထားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Thread တစ်ခုတွင် သင်ဝင်ရောက်ရေးသားခြင်းမရှိစေကာမူ ၎င်း Thread အောက်၌ပို့စ်အသစ်တစ်ခု ရောက်ရှိနေသည့်အချိန်တိုင်း email ဖြင့် အသိပေးချက်များရရှိစေရန် ရွေးချယ်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်စေရန် ထို Thread စာမျက်နှာရှိ 'Subscribe to this thread' စာသားကိုနှိုပ်ရမည်။
အကယ်၍ သင်သည် Thread တစ်ခုမှ email အသိပေးချက်များ ပေးပို့နေခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုပါက သင်၏ပို့စ်အားပြင်ဆင်၍ဖြစ်စေ၊ ဤနေရာ မှ ထိုအကြောင်းအရာအား unsubscribing လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသော အသင်းဝင်များသာ အီးမေးလ်အသိပေးမှုများအား လက်ခံနိုင်ပြီး အသင်းဝင်တို့သည် မိမိတို့မည်သည့်အခါမျိုးတွင် ပုံသေအသိပေးမှုအားလက်ခံမည်ကို သူတို့၏ ပင်မထိန်းချုပ်မှုဌာနစာမျက်ရှိရွေးချယ်မှုများပြင်ရန် တွင် သတ်မှတ်ချိန်ညှိထားနိုင်သည်။
အီးမေးလ်ဖြင့်အသိပေးမှုအား 'Thread Subscription' ဟုလည်းခေါ်သည်။
ဖိုးပြုံးချိုလေးများဆိုသည်မှာ သင်၏ရေးသားမှုများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော ပုံအသေးစားကလေးများဖြစ်ပြီး ဟာသပြက်လုံးများ၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း စသည့် မိမိ၏စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုများအား ကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာ... သင်သည် ရင်ထိတ်စရာစကား ရေးသားပြီးနောက် “နောက်တာပါ” ဟုပြောမည့်အစား 'wink' ဖိုးပြုံးချိုအား အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်သည် အီးမေးလ်များ၊ အင်တာနက်စကားဝိုင်းများကို အသုံးပြုဖူးသူဖြစ်ပါက ဖိုးပြုံးချိုလေးများ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သတ်မှတ်ထားသောစာသားများ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဖိုးပြုံးချိုလေးများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဥပမာ - :) သည် ပြုံးရွှင်နေသောမျက်နှာအဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။ ဖိုးပြုံးချိုစာသားများကို နားလည်လိုပါက သင်၏ဦးခေါင်းအား ဘယ်ဘက်သို့စောင်း၍ စာသားအားကြည့်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ :) သည် မျက်စိနှစ်လုံးနှင့် ပြုံးနေသောပါးစပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ကို သင်တွေ့ရမည်။
ဤဖိုရမ်တွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖိုးပြုံးချိုစာရင်းအား ဤနေရာ တွင်ကြည့်ပါ။
အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သင်သည်စာသားများကို ဖိုးပြုံးချိုလေးများအဖြစ်သို့ မပြောင်းလဲစေလိုသည်လည်းရှိမည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် သင်သည် ပို့စ်အသစ်တစ်ခု ရေးသားရာနေရာအောက်ဘက်ရှိ “စာသားထဲမှာ ဖိုးပြုံးချိုလေးများ မထည့်ပါ” ဆိုသည့် checkbox အား ရွေးချယ်ပါ။
နှိပ်၍အသုံးပြုနိုင်သော စာသားခလုတ်များနှင့် ဖိုးပြုံးချိုလေးများ
ထိုခလုတ်များသည် သင်၏ရေးသားမှုများ၊ စာချွန်လွှာများအတွင်းသို့ vB Code များ၊ ဖိုးပြုံးချိုလေးများအား လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန် သင်သည်အလိုရှိရာခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် vB Code စာရင်းမှ အလိုရှိရာကို နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် Basic, Standard နှင့် Enhanced ဟူ၍ ပုံစံမြင်ကွင်းသုံးမျိုးပေးထားသည်။ Basic မြင်ကွင်းကိုသုံးသည့်အခါ အသင့်သုံး vB Code များတွေ့ရမည်မဟုတ်ဘဲ အလိုရှိရာ vB Code စာသားများကို ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရမည်။
Standard မြင်ကွင်းကိုအသုံးပြုလျှင် သင်ပြင်ဆင်လိုသော စာသားကိုရွေးချယ်၍ အလိုရှိရာခလုတ်ကို နှိပ်ရမည်။ ထိုအခါ ရွေးချယ်ထားသောစာသားဘေးနှစ်ဖက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော vBcode စာသားများဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ မည်သည့်စာသားကိုမျှမရွေးချယ်ဘဲ ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါက vBcode စာသားအား သင်စာရိုက်ရန် စတင်ထားသောနေရာ(cursor)တွင် မြင်ရမည်။ ထို့နောက် ၎င်း code စာသားနှစ်ခုကြားတွင် သင်အလိုရှိရာစာသားကို ရေးသားနိုင်သည်။
Enhanced မြင်ကွင်းကိုသုံးသည့်အခါတွင် ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါက သင်ရွေးချယ်ထားသောစာသားကို တိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ပေးမည်။ ဤပုံစံသည် WYSIWYG ပုံစံဖြစ်ပြီး What You See Is What You Get (သင်တည်းဖြတ်ရာ သင်မြင်တာ) ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သင်နောက်ဆုံးမြင်ရမည့်စာသားပုံစံအား သင်ပြင်ဆင်နေသည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီ မြင်တွေ့နေရမည်။ မည်သည့်စာသားမျှမရွေးချယ်ထားဘဲ ခလုတ်တစ်ခုအားနှိပ်ပါက မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမျှ ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
ဖိနှိပ်နိုင်သော ဖိုးပြုံးချိုလေးများကို အသုံးပြုရန် သင်၏ရေးသားမှု၌ ထည့်သွင်းလိုသော ဖိုးပြုံးချိုအား နှိပ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ဖိုပြုံးချိုစာရင်းအပြည့်အစုံအား ကြည့်ရှုရန်(ခွင့်ပြုထားမှသာ) “အခြားပုံလေးတွေ” ကိုနှိပ်ပါ။
မဲဆန္ဒတွေဘယ်လိုတောင်းမလဲ၊ ဘယ်လိုပေးမလဲ။ ?
ဤဖိုရမ်ရှိ အချို့အကြောင်းအရောခေါင်းစဉ်များအောက်တွင် မဲဆန္ဒပေးသော (သို့မဟုတ်) မဲဆန္ဒတောင်းခံသောကဏ္ဍကို သတိပြုမိကောင်းပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို “မဲဆန္ဒတောင်းခံခြင်း” ဟုခေါ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်သည် ဆွေးနွေးချက်အသစ်တစ်ခု ရေးသားသောအခါ မဲဆန္ဒခြင်းတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤနေရာတွင် သင်သည်မေးခွန်းတစ်ခုမေးမြန်းနိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်သောရွေးချယ်ခွင့် အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ အခြားအသင်းဝင်များမှ ၎င်းတို့ဆန္ဒအလျောက် မဲဆန္ဒပေးနိုင်ပြီး မဲဆန္ဒအရေအတွက်ရလဒ်အား ထိုအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်အောက်၌ ဖော်ပြလိမ့်မည်။
မဲဆန္ဒခြင်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန် သင်ဆွေးနွေးချက်အသစ်တစ်ခု ရေးသားသောအခါ စာမျက်နှာအောက်ခြေရှိ “ဤဆွေးနွေးချက်အတွက် မဲဆန္ဒကောက်ယူမည်” ဟူသော checkbox ကို ရွေးချယ်ပေးရမည်။ ပြီးလျှင် သင်ပါဝင်စေချင်သော ဖြစ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်ခွင့်အရေတွေက်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။
ထို့နောက် “ဆွေးနွေးချက်ကိုတင်မည်” ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါတွင် သင်သည်မဲဆန္ဒခြင်းပြုလုပ်သည့် စာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိသွားမည်။ ထိုစာမျက်နှာ၌ သင်အလိုရှိရာမေးခွန်းကို ရေးသားနိုင်ပြီး သင်ပါဝင်စေလိုသော ရွေးချယ်ခွင့်များကို စာရင်းပြုစုရမည်။
မဲဆန္ဒခြင်းတစ်ခုအတွက် အချိန်ကန့်သတ်မှုကိုလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - မဲဆန္ဒပေးရန် အချိန်တစ်ပတ်သာ ဖွင့်ပေးထားမည်။
မဲဆန္ဒတောင်းခံရာသည်ကို မဲပေးရန် သင်မဲပေးလိုသော ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီး “အခုပဲရွေးလိုက်မယ်” ဟူသော ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ သင်သည် ဆန္ဒမဲမပေးခင် မဲရလဒ်များကို “ရလဒ်များကိုကြည့်မည်” စာသားကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဆန္ဒမဲပေးခြင်းသည် မလုပ်မနေရလုပ်ရမည့်အရာမဟုတ်ဘဲ ရွေးချယ်ခွင့်ပြုထားသောတစ်ခုခုကို ဆန္ဒပြုနိုင်သကဲ့သို့ မဲပေးဘဲလက်ရှောင်နေနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် သင်သည်ဆန္ဒမဲပေးပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၎င်းရွေးချယ်မှုအား နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ဆန္ဒမဲများပေးရာတွင် သတိထားရပါမည်။
ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူများသည် သင်၏ရေးသားမှုများတွင် သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်အမျိုးအစားများကို ပူးတွဲထားရန် ပူးတွဲဖိုင်စနစ်ကို ခွင့်ပြုထားနိုင်သည်။ ဖိုင်အမျိုးအစားများတွင် ပုံရိပ်များ၊ စာသားဖိုင်များ၊ ချုံ့ထားသောဖိုင်များ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ပူးတွဲလိုသော ဖိုင်အရွယ်အစားကို ကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။
သင်၏ရေးသားမှုအသစ်တစ်ခုတွင် ဖိုင်ပူးတွဲရန် စာရေးဖွဲ့မှုစာမျက်နှာအောက်ဘက်ရှိ “တွဲမည့်ဖိုင်များစီစဉ်ရန်” ဆိုသည့် ခလုတ်အားနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် သင်၏ Hard Drive ထဲမှ အလိုရှိရာဖိုင်ကို ညွှန်ပြပေးရမည်။
ရေးသားမှုပြီးစီးပါက ဖိုရမ်၏သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ပူးတွဲဖိုင်ပုံအား နမူနာပုံဖြင့်ပြသမည်။ ပူးတွဲဖိုင်တွင်ပါဝင်သည်များကို ကြည့်ရှုရန် (နမူနာပုံပြသထားခြင်းမရှိပါမှ) ပူးတွဲဖိုင်ပုံ၏ဘေးရှိ ဖိုင်နာမည် link အား နှိပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူများသည် အကြောင်းအရာသစ်များ၊ အသစ်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာချွန်လွှာများအတွက် သင်္ကေတပုံရိပ်လေးများ(icon) ကို ဖန်တီးပေးထားသည်။ ဆွေးနွေးချက်ပုံသင်္ကေတများသည် ဆွေးနွေးချက်အသစ်များနှင့်တွဲ၍ ထည့်သွင်းထားသော သင်္ကေတပုံရိပ်လေးများဖြစ်ပြီး သင်၏ရေးသားချက်အား ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်သည်နှင့် ရေးသားသူ၏စိတ်ခံစားချက် (သို့မဟုတ်) ပါဝင်သောအကြောင်းအရာ စသည်တို့ကို သိသာစေရန် အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ ဆွေးနွေးချက်အသစ်များ၊ စာချွန်လွှာများရေးသားချိန်၌ ထိုသင်္ကေတများကို မမြင်တွေ့ရပါက ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူများမှ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခွင့် ပိတ်ပင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်ပိုင်ရေးသားချက်များကို ပြင်နိုင်ပါသလား။ ?
သင်သည်ဖိုရမ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါက သင်၏ရေးသားချက်များကို ပြင်နိုင်၊ ဖျက်နိုင်သည်။ ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူမှလည်း အလိုရှိပါက ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခွင့်ကို ပိတ်ထားနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ကြီးကြပ်သူမှ ဖိုရမ်ကိုမည်သို့ စနစ်သတ်မှတ်ထားသည့်အပေါ်မူတည်၍ သင်သည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း၌သာ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခွင့်ရနိုင်သည်။
မိမိ၏ရေးသားချက်များအား ပြင်ရန်၊ ဖျက်ရန် သင်ပြင်ဆင်လိုသည့်ရေးသားချက် ညာဘက်အောက်ခြေရှိ ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ရေးသားချက်သည် အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခု၏ ပထမဆုံးရေးသားချက်ဖြစ်ပါက ထိုရေးသားချက်ကိုဖျက်ပစ်ခြင်းသည် ထိုအကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးအား ဖျက်ပစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုများပြီးစီးပါက ဖိုရမ်ရှိအခြားအသင်းဝင်များအား သင်,သင်၏ရေးသားချက်အား ပြင်ဆင်ထားကြောင်း အသိပေးသည့် မှတ်ချက်တစ်ခု ပေါ်လာမည်။ ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူများနှင့် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်များမှလည်း သင်၏ရေးသားချက်အား ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့အတွက်မူ အဆိုပါမှတ်ချက် ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်များသည် သီးသန့်ဖိုရမ်များကို ကြီးကြပ်သူများဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် အသင်းဝင်တို့၏ရေးသားဆွေးနွေးချက်များအား ပြင်နိုင်၊ ဖျက်နိုင်၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပြီး အခြားဖိုရမ်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဖိုရမ်တစ်ခုအတွက် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်များကို သာမန်အသင်းဝင်များထဲမှ ထူးထူးကဲကဲ ကူညီသူများ၊ ၎င်းတို့ထိန်းသိမ်းရမည့် ဖိုရမ်၏ရပ်တည်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာဗဟုသုတပြည့်ဝသူများကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။
ဘာကြောင့် ရေးသားဆွေးနွေးချက်များမှ တချို့စကားလုံးများ ပြောင်းလဲကုန်ရတာလဲ။ ?
ဖိုရမ်ကြီးကြပ်သူမှ အချို့စကားလုံးများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်၏ရေးသားဆွေးနွေးချက်များတွင် ထိုပိတ်ပင်ထားသော စကားလုံးများပါဝင်ပါက ၎င်းတို့ကို ***** ဖြင့် အစားထိုးမည်။
အသင်းဝင်များအားလုံးအတွက် ပိတ်ပင်ထားသော စကားလုံးများမှာတူညီပြီး ထိုကဲ့သို့ပိတ်ပင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မှ စကားလုံးများအား ရှာဖွေခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်စုံတစ်ဦးမှ အကြံဥာဏ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။